Best Myanmar property and Yangon realestate and service apartments
- - အိပ်ခန်း၁ခန်း အိပ်ခန်း၂ခန်း အိပ်ခန်း၂ခန်းတွဲ အိပ်ခန်း၃ခန်း အိပ်ခန်း၃ခန်းတွဲ အိပ်ခန်း၄ခန်းတွဲ(၂ထပ်)
အိမ်ခြံမြေ ၄၈ ခု တွေ့ရှိပါသည်။
0 စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၁ခန်း
ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြယ်စင်အိမ်ရာသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဇိမ်ခံပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်၊ ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ငှာရမ်းခများ အားလုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
905 စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၂ခန်း
Simple, modern and elegant interiors embody this two bedroom apartment. High quality bathroom and kitchen appliances and fixtures, perfect foracouple. Green views of the courtyard.
938 စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၂ခန်း
Simple, modern and elegant interiors embody this three bedroom apartment.
0 စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၃ခန်း
ဘီ - ၀၀၁
၉၄၆ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၂ခန်း
ဘီ - ၀၀၂
ခေတ်မီရိုးရှင်းသော စတိုင်ကျလှပသည့် အတွင်းပြင်ဆင်မှုများဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အိပ်ခန်း၂ခန်းပါ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ပုံဖော်ထားပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသော ရေချိုးခန်းနှင့် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံပါ၀င်လျက်ရှိသော ဤတိုက်ခန်းသည် စုံတွဲများနှင့် မိသားစုနည်းသော သူများနှင့် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ အိမ်ဝင်းအပြင်ဘက်တွင်လည်း စိမ်းစိုသာယာလှပသော မြင်ကွင်းရှိပါသည်။
၉၃၈ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၂ခန်း
ဘီ - ၀၀၅
၁၈၇၄ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၁ခန်း
ဘီ - ၀၀၆
ပဲခူးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြယ်စင်အိမ်ရာသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဇိမ်ခံပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်၊ ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ငှာရမ်းခများ အားလုံးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
၁၅၁၁ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၃ခန်း
ဘီ - ၀၂၁
၆၅၁ စတုရန်းပေ -
ဘီ - ၀၂၂
၉၀၆ စတုရန်းပေ အိပ်ခန်း၂ခန်း